गजल : हेलो सरकार — Motivate News
बि. ए सकेँ जागीर खान कता जाउँ म सरकार ?
यतै काम गर भन्छौ कि लागुँ गाउँ म सरकार ?
अस्ति एकठाउँ बोलाको थ्यो अन्तरबार्ता दिन
काम नगरी एक्स्पेरिएन्स कता पाँउ म सरकार ?
आफ्नो देशमा केही गर्नुछ म जस्ता ले धेरै भने
केही नदेख्दा नि धाक अझै के लाउँ म सरकार ?
आश देखाउने धेरै भेटेँ आश्वाशन का मात्रै धनी
एम्बेस्सी र कन्सलटेन्सि कति धाँउ म सरकार ?
राजनितीक खिचातानी देश डुब्यो अस्थिरता ले
बाटो देखाउ कसरी पो गरि खाँउ म सरकार ?